आईतवार, पौष १५, २०७५
काठमाडौं: नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको २०औं साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा उपप्रधान एबं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उद्घटन गरेका थिए । प्रमुख अतिथि उपप्रधान एबं रक्षामन्त्री पोखरेलले पत्रकार देशको तेस्रो आँखा भएकाले पत्रकारिता बिना देशको बिकास सम्भव नहुने बताए । उनले पत्रकारिताले साँचो र निष्पक्ष समाचार दिनुपर्ने बताउँदै साँचोलाई साँचो र गलतलाई गलत भनी उचित मार्गदर्शन दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा पत्रकारहरुले आ-आफ्नो भनाई राखेका थिए । भनाई राख्ने क्रममा नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष नकुल अर्यालले नेपाल पत्रकार महसंघ केन्द्रीय समितिले अब महासंघका सबै निकायको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाट गर्ने निर्णय गरेर पार्टी सदस्यता शुद्धीकरणमा सहयोग पुग्ने बताए । कार्यक्रममा उनले भने, ‘काठमाडौं शाखाको सदस्यता रहेको पहिलो पानामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीको नाम छ अब त्यो नाम पहिला हटाएर शुद्धीकरण अभियान सुरु गरौं ।’ उनले कुनैपनि पार्टीमा सदस्य भएकाहरुलाई हटाएर शुद्धीकरण अभियान सुरु गर्ने बताए । अर्यालले प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने निर्णयले महासंघमा ठेकेदारी प्रथा अन्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले २०५६ सालमा नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि उनले दुई पटक तत्कालीन एमालेबाट संविधानसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव लडिसकेका छन् । पछिल्लोपल्ट त उनी चुनाव जितेर सांसद र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका छन् । नेकपा एमाले काभ्रेको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएका उनले नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं सदस्यता भने छाडेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा छुद्र मुख भएका गोकुल बास्कोटालाई सञ्चारमन्त्री र प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएपछि उनको घमण्ड चुलिएको छ । बाँस्कोटाका कारण सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
बास्कोटा प्रवक्ता भएपछि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पञ्चायती शैलीमा लुकाउने गरिएको छ । झारा टार्नका लागि आधा सूचना गोप्य राखेर मन्त्री बास्कोटाले हरेक बिहीबार मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । उनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन अर्तीउपदेश दिने समारोह जस्तो देखिने गरेको छ । उनले हरेक बिहीबार पत्रकारलाई हेडलाइन राख्न उपदेश दिँदै आएका छन् ।
महासंघको सदस्यता प्राप्त गर्दा उनी दृष्टि साप्ताहिकमा कार्यरत थिए । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भइसक्दा पनि सदस्यताबाट राजीनामा नदिएर यिनले कुन नैतिकता प्रर्दशन गरेका हुन् ? नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौ जिल्लाका १३ सय ७२ सदस्यमध्ये मन्त्री बास्कोटाको नाम दोस्रो नम्बरमा छ । ठूलाठूला आदर्शका कुरा गर्ने बास्कोटालाई मन्त्री भएपछि पनि सदस्यता प्यारो लाग्दा अरूलाई निष्पक्ष र स्वच्छ पत्रकारिताको उपदेश दिन कुन नैतिकताले दिन्छ ? बास्कोटाको सदस्यता खारेज गरेर नेपाल पत्रकार महसंघमा शुद्धीकरण सुरु गर्न माग भएको छ ।।